Sida aan uga caawino dadka cuntada qaata inay u diyaar garoobaan xilliga qaboobaha
Sida aan uga caawinno dadka cuntada qaata inay isu diyaariyaan xilliga qaboobaha
Dayrta ayaa socota, tanna waxa la yimaada heer kul qabow. Meals on Wheels waxay leedahay barnaamij ka shaqeeya hubinta in dadka cuntada hela ay heli doonaan cunto, xitaa marka cimiladu aysan oggolaanaynin bixinta cuntada caadiga ah.
Sababtoo ah dhamaanteen waan ognahay qorshaynta ka hor jiilaalka inay muhiim tahay, mutadawiciintu waxay sooxiranayaan in kabadan 10,000 oo ah cuntooyinka isdabajooga ah 25ka Oktoobar Blizzard Box Blitz. Sanduuqa Blizzard waa cunto la geeyo macaamiisha Meals on Wheels oo la keydin karo ka dibna la isticmaali karo waqti kasta haddii ay xaalad degdeg ahi timaaddo.
Sanduuqyada sidoo kale waxaa ku jira macluumaad ku saabsan adeegyada deg-degga ah ee deegaanka, iyo sidoo kale kheyraad loogu talagalay gargaarka kuleylka. Waan ognahay in dadka ku nool dakhli go'an, in biilka kuleylka ee bishii uu culeys weyn ku noqon karo, gaar ahaan xilliyada qaboobaha. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelineynaa SUPERVALU, oo iyadu bixisa cunnada loogu talagalay Sanduuqyada Blizzard iyo mutadawiciinta iyagu waqtiga ka qaata shaqadooda si ay uga caawiyaan xirxirashada.
Hadana haddii aad la dhibtooneyso qarashka guriga, ma ahan inaad kala doorato cuntada iyo bixinta biilasha kululaynta. Nasiib wanaag, barnaamijyo heer gobol iyo heer federaal ah ayaa loo sameeyay inay ka caawiyaan arrintan. Haddii adiga ama qof aad taqaanid ku dhibtoonayo bixinta biilka kuleylka jiilaalka, barnaamijyada soo socda ayaa kaa caawin kara.
Barnaamijka Caawinta Tamarta
Ku Barnaamijka Caawinta Tamarta (EAP) waxay ka caawisaa bixinta qarashka kuleylka guriga iyo hagaajinta foornada qoysaska uqalma dakhliga. Barnaamijkan waa mid federaalku maalgeliyo mana aha in dib loo bixiyo, maadaama lagu bixiyo deeq ahaan. Deeqaha ayaa loo heli karaa kireystayaasha iyo milkiileyaasha guryaha, waxayna ku saleysan yihiin tirada qoyska, dakhliga, nooca shidaalka, iyo isticmaalka tamarta.
Adeegyada laga bixiyo Barnaamijka Caawinta Tamarta waxaa ka mid noqon kara:
Bixinta biilasha tamarta
Ka caawi kala goynta korontada ama keenista shidaalka lagama maarmaanka ah
Tacliin ku saabsan isticmaalka hufan ee nabdoon ee tamarta kululaynta guriga
U doodista shirkadaha tamarta bixiya iyo bixiyeyaasha adeegga aadanaha iyagoo ka wakiil ah macaamiisha
Dayactirka ama beddelka nidaamyada kuleylka ee cilladaysan milkiileyaasha guryaha
Haddii aad xiiseyneyso, marka hore ogow haddii aad xaq u leedahay adoo fiirinaya Tilmaamaha Dakhliga Barnaamijka Gargaarka Tamarta Ugu Badan, markaa buuxi codsi iyo raadso bixiyahaaga EAP.
Xeerka Cimilada Qabow
Ku Xeerka Cimilada Qabow (CWR) waxaa loo sameeyay inay ka caawiso ilaalinta iyo isku xirida kuleylkaaga. Dhamaan shirkadaha korantada iyo gaaska dabiiciga waxay bixiyaan ilaalin CWR. Waad abuuri kartaa qorshe lacag bixin ah oo kaa caawin doona in biilasha kuleylka ee billaha ah ay noqdaan kuwo la heli karo, iyo ka hortagga kuleylkaaga inuu dansan yahay. Waa inaad la sameysid qorshaha lacag bixinta CWR shirkaddaada korantada ama gaaska dabiiciga si aad u hesho difaaca CWR. Qorshayaal lacag bixin oo kala duwan ayaa la bixiyaa iyadoo lagu saleynayo dakhliga qoyska iyo shirkadda korantada ama gaaska dabiiciga.
Xilliga Xukunka Cimilada Qabow waa Oktoobar 15-Abriil 15. Qorshooyinka lacag-bixinta waa in la dejiyaa xilligan.
Si aad isu diiwaangeliso la xiriir shirkadda korantada ama gaaska dabiiciga ah oo codso qorshe lacag-bixin Xeerar Cimilo qabow.
Barnaamijka Caawinta Cimillada ee Dakhliga Hoose
Barnaamijkan waxaa taageeraya Kheyraadka Tamarta ee Minnesota kuwaas oo lacag siiya hay'adaha Barnaamijka Waxqabadka Bulshada (CAP). Ma jiraan wax kharash ah oo loogu talagalay macaamiisha. Horumarinta soo socda ayaa lagu maalgeliyaa barnaamijkan si looga caawiyo kharashka kuleylka inta lagu jiro xilliga qaboobaha:
Hubinta tamarta caadiga ah
Tijaabinta albaabka kafuunka iyo qufulka hawada
Ku jiif garaashka hoostiisa, aasaaska, meelaha gurguurta, iyo dahaarka qafiska
Ka bixida banaanka qalajiyaha iyo marawaxada qiiqa
Tuubbada iyo tuubbada dahaadhka ee meelaha aan dhammaystirnayn
Nidaamka kuleylka degdega ah iyo bedelka qalabka kululeynta biyaha
Si aad xaq ugu yeelatid barnaamijkan waa inaad buuxisaa tilmaamaha gobolka iyo federaalka. Si aad u ogaato haddii aad u-qalanto, la xiriir Barnaamijka Waxqabadka Bulshada ee deegaankaaga.
Oktoobar 20, 2016